अमेरिकी अंग्रेजी बनाम ब्रिटिश अंग्रेजी – Vocre
अमेरिकी अंग्रेजी बनाम ब्रिटिश अंग्रेजी
अ Lear्ग्रेजी सिक्नु आफ्नै लागि पर्याप्त छ. जब तपाईले यो तथ्यलाई ध्यानमा राख्नुहुन्छ कि अंग्रेजी शब्दहरू देशहरू बीच धेरै भिन्न हुन्छन्, क्षेत्रहरु, राज्यहरु, र शहरहरू, र अ ​​in्ग्रेजीमा स learning्केत पाएका शब्दहरू कहिलेकाहीं असम्भव महसुस गर्न सक्दछ.
ब्रिटिश शब्दहरू अमेरिकी शब्दहरू भन्दा अर्थ र सन्दर्भमा भिन्न छन्. अमेरिकी अंग्रेजी बनाम बीचको भिन्नता पत्ता लगाउनुहोस्. British English — and why these differences exist in the first place.
अमेरिकी अंग्रेजी बनाम ब्रिटिश अंग्रेजी: एक ईतिहास
ब्रिटिश शासन अन्तर्गत अन्य धेरै देशहरू जस्तै, अमेरिकाले अंग्रेजीलाई यसको प्राथमिक भाषाको रूपमा अपनायो. अझै अमेरिकी अ and्ग्रेजी र बेलायती अंग्रेजीले एउटै शब्द साझा गरेको छ, वाक्य संरचना, र व्याकरण नियम, आज धेरै जसो अमेरिकीहरू बोल्छन् अंग्रेजी गर्दैनन् आवाज ब्रिटिश अंग्रेजी जस्तो.
मा 1776 (जब अमेरिकाले बेलायत माथि आफ्नो स्वतन्त्रता घोषणा गर्‍यो), कुनै मानकीकृत अंग्रेजी शब्दकोशहरू थिएनन्. (जबकि शमूएल जोनसनको हो अ Language्ग्रेजी भाषाको शब्दकोश मा प्रकाशित भएको थियो 1755).
पहिलो अंग्रेजी शब्दकोश प्रकाशित भयो 1604 (लगभग दुई शताब्दी पछि कोलम्बस पहिलो उत्तर अमेरिकी को यात्रा गरे). प्राय: अ English्ग्रेजी शब्दकोश विपरीत, Robert Cawdrey's टेबल वर्णमाला सबै अंग्रेजी शब्दहरूको स्रोत सूचीको रूपमा प्रकाशित गरिएको थिएन. सट्टा, यसको उद्देश्य पाठकहरूलाई 'कडा' शब्दहरू बुझाउनु हो जुन उनीहरूको अर्थ बुझ्दैनन्.
अक्सफोर्ड अंग्रेजी शब्दकोश
को अक्सफोर्ड अंग्रेजी शब्दकोश फिलोलोजिकल सोसाइटी लन्डन द्वारा मा बोलाइएको थियो 1857. यो बर्ष बीच प्रकाशित भयो 1884 र 1928; अर्को शताब्दीभरि पूरकहरू थपियो, र शब्दकोश १ 1990 1990 ० को दशकमा डिजिटलाइज गरिएको थियो.
OED ले हिज्जे र शब्दहरूको परिभाषालाई मापन गर्‍यो, it didn’t make major changes to their spelling.
नूह वेबस्टर शब्दकोश
नूह वेबस्टरको पहिलो शब्दकोश मा प्रकाशित भएको थियो 1806. यो पहिलो अमेरिकी शब्दकोश थियो, र यसले ब्रिटिश शब्दकोशबाट केही शब्दहरूको हिज्जे परिवर्तन गरेर फरक पार्दछ.
वेबस्टरले विश्वास गरे कि अमेरिकी अ spe्ग्रेजीले शब्दहरूको आफ्नै हिज्जे सिर्जना गर्नुपर्दछ - ती शब्दहरू जुन वेबस्टर आफैले उनीहरूको हिज्जेमा असंगत भएको विश्वास गर्दछन्।. उ शब्दहरूको नयाँ हिज्जे सिर्जना गर्नुभयो that he considered to be more aesthetically pleasing and logical.
मुख्य हिज्जे परिवर्तनहरू सामेल छन्:
रंगलाई जस्तो केहि शब्दहरूमा यू ड्रप गर्दै
दोस्रो साइलेन्ट एललाई त्याग्ने शब्दहरू जस्तै यात्रामा
शब्दलाई SE मा SE लाई परिवर्तन गर्दै, like defence
K ड्र्याक गर्दै मस्मिक जस्ता शब्दहरूमा
एनालग जस्तो शब्दहरूमा यू ड्रप गर्दै
S लाई शब्दमा S परिवर्तन गरिदै Z मा सामूज गर्नुहोस्
वेबसाइटले पनि सिके 26 अ that्ग्रेजीको लागि आधार मानिने भाषाहरू (संस्कृत र ए Anglo्गलो स्याक्सन सहित).
अमेरिकी अंग्रेजी बनाम. ब्रिटिश अंग्रेजी हिज्जे भिन्नता
बिचको भिन्नता अमेरिकी हिज्जे र ब्रिटिश हिज्जे त्यो नूह वेबस्टरले सुरु गरेको आज सम्म पनि अटल छ. अमेरिकीहरू सामान्यतया यूको साथ र color जस्तो शब्दहरू वा K अन्तमा संगीत जस्तो शब्दहरू हिज्जे गर्दैनन्.
ब्रिटिश अ English्ग्रेजीले अनिवार्य रूपमा उनीहरूले अपनाएको भाषाबाट शब्दहरूको हिज्जे प्रयोग गर्दछ. यी शब्दहरु, लोनवर्ड्स भनिन्छ, लगभग श्रृंगार 80% अंग्रेजी भाषा को!
भाषाहरू अ्ग्रेजीले शब्दहरू 'उधारो' लिएको छ:
अमेरिकी अंग्रेजी बनाम. ब्रिटिश अंग्रेजी उच्चारण भिन्नता
अमेरिकीहरूले शब्द उच्चारण गर्ने तरिका र ब्रिट्सले बोल्ने तरीकाका बीचमा मुख्य भिन्नता एक अप्रशिक्षित कानमा पनि स्पष्ट छ. अझै, त्यहाँ एक विशेषज्ञ छ, standardized difference in the pronunciation of English words.
अधिक भ्रमित कुरा बनाउने, संयुक्त राज्यका नागरिकहरूसँग एक प्रकारको एक्सेन्ट छैन - र त्यहाँ बेलायती उच्चारणमा पनि भिन्नताहरू छन्, depending on where you live in the United Kingdom.
पत्र A को उच्चारण
अमेरिकी र ब्रिटिश अ English्ग्रेजी बीच उच्चारणमा सबैभन्दा सामान्य भिन्नता मध्येको एक अक्षर A हो. बेलायतीले सामान्यतया "आह" को रूपमा उच्चारण गर्दछन् जबकि अमेरिकीहरूले अझ बलियो घोषणा गर्छन्; शब्दमा भएका मानिस जस्तै झन् आवाज ack भन्दा घृणा.
बेलायतीले पनि अक्षर R लाई उच्चारण गर्दैन, जब यो स्वरको अघि हुन्छ, जस्तै शब्दहरूमा पार्क वा घोडा. (यद्यपि, तपाईं संयुक्त राज्य अमेरिका मा कहाँ हुनुहुन्छ मा निर्भर गर्दै।, तपाइँ रु कि त उच्चारण गर्न सक्नुहुन्न. म्यासाचुसेट्सका केही भागहरूमा उनीहरूका रु, पनि).
अमेरिकी र ब्रिटिश अंग्रेजी मात्र हिज्जे र उच्चारणमा भिन्न छैन. त्यहाँ दुई बीच व्याकरण भिन्नताहरू पनि छन्, also.
मुख्य भिन्नताहरूमध्ये एउटा यो हो कि ब्रिट्सले हालको उत्तम काललाई अमेरिकीहरू भन्दा बढी प्रयोग गर्दछ. वर्तमान उत्तम कालको एक उदाहरण हुनेछ, “टमले कतै पनि आफ्ना जुत्ताहरू फेला पार्न सक्दैनन्; उहाँ तिनीहरूलाई भेट्टाउन छोड्नुभयो। ”
एकवचन क्रियाहरू सधैं अमेरिकी अंग्रेजीमा सामूहिक संज्ञा पालन गर्दछन्. उदाहरण को लागी, अमेरिकीहरूले भने, “बथान उत्तरतिर बसाइँ सर्दैछ,"जबकि ब्रिट्स भन्छन्, "बथान उत्तरतिर लागिरहेका छन्।"
शब्दावली विभिन्न राज्यहरूमा भिन्न हुन सक्दछ, शहरहरू, र एक देशमा एक्लै क्षेत्रहरू. त्यसो भए, यो कुनै आश्चर्यको कुरा होइन कि अमेरिकी भोकब पोखरीमा प्रयोग हुने भोकब शब्दहरू भन्दा धेरै फरक छ. केही धेरै सामान्य शब्दहरू जुन ब्रिट्सले अमेरिकीहरू भन्दा भिन्न प्रकारको प्रयोग गर्दछ:
चिप्स (फ्रेन्च फ्राइज)
बैंक बिदा (संघीय बिदा)
चल्ती खाता (खाता जाँच गर्दै)
धुलो बिन (फोहोर)
पोष्टकोड (जिप कोड)
स्किम्ड दुध (तर झिकिएको दुध)
त्यसोभए अंग्रेजीको कुन फारम सहि छ? जबकि त्यहाँ अंग्रेजी का प्रकारहरु बीच एक ध्यान दिएर भिन्नता छ (विशेष गरी अमेरिकामा बोलिने अंग्रेजी बीचमा. र संयुक्त राज्य अमेरिका), there is no one right or wrong way to pronounce these words.
किनभने विश्व प्रसिद्ध टिभी कार्यक्रमहरू अमेरिकामा चित्रित हुन्छन्।, धेरै व्यक्तिहरू जसले दोस्रो भाषाको रूपमा अ learn्ग्रेजी सिक्छन् अमेरिकी अंग्रेजी सिक्छन्. यद्यपि ब्रिटिश साम्राज्यले विश्वको धेरै भाग औँल्यायो, teachers speak British English.
संसारका अन्य क्षेत्रहरू जहाँ अंग्रेजी हिज्जे, भोब, and grammar differ include Canada and Australia.